Premiere Iningi waseshashalazini, Prom, lomshado umngane udinga ukushintsha amateki ukhululekile ukuba nenhle isikebhe izithende futhi jeans futhi svitshot - i kusihlwa noma cocktail ingubo. Ngeshwa, ngo-wezigqoko eziningi kithi lezi zinto ezinhle zokugqoka - izivakashi ezingavamile. Futhi izinsuku ezimbalwa ngaphambi umcimbi awe ezisheshayo ukugijimela izitolo bese ubheka ingubo ofanele kakhulu. Kodwa kusihlwa izibuko iqembu kudinga kalula, ingubo akumelwe nenzuzo kuphela ukugcizelela izici sibalo, kodwa ahamibsane ecacisiwe yokugqoka, abaningi bayenqaba ukulandela.
Ngobusuku obandulela uNyaka Omusha WamaShayina amaholide yisikhathi ukuze ufunde ukuthi akhethe okuhle kusihlwa sigqoka futhi cocktail. Izingubo isitayela obuphelele komunye noma eminye imicimbi kanye nohlobo sibalo?
Grand soir, noma, uma elihunyushwe ngokwezwi nezwi, "usuku olukhulu", mhlawumbe komkhosi kunazo zonke izinyathelo ezikhona. Loku kungafaka phakathi nedili yomphakathi kanye nemiklomelo, ekudlaleni at opera izindlu emhlabeni, amabhola kanye esiza abantulayo izenzakalo ezinkulu. Uma kwenzeke ukuba bahambele reception enjalo, bese kukhethwa ingubo, futhi wonke isithombe lilonke kumele wasondela njengento ebaluleke kakhulu.
Lezi zintokazi ngesikhathi reception uthayiphe Grand soir kuyadingeka ukubeka phezu kwezindlu zangasese kusihlwa eside kakhulu, cocktail izingubo uvinjelwe. The dress akufanele kakhulu ehlotshiswe rhinestones noma sequins, bezinto uthi, kodwa ezibizayo futhi muhle. Kuyefana nasendleleni ubucwebe, ubucwebe kungavunyelwe, amagugu wamukelekile zemvelo, uboya, izindwangu ezibizayo. ubulili ngokweqile kubuye ezingafanele, isho cleavage ezijulile, imihlane oluze, ephezulu cut isiketi.
Gala isithombe kungenziwa kulekelelwa amagilavu, esikhwameni amancane futhi satin izicathulo. Akuphoqelekile kusihlwa izimonyo futhi kwekhanda.
Okulandelayo ku-yemikhosi. Linikeza kuphela dress kusihlwa ukuba phansi, nenhle kakhulu futhi agodliwe, kodwa ngesikhathi esifanayo amahle kakhulu futhi enesizotha. Lokhu kungaba ingubo ende yizicukuthwane luhlaza, emahlombe, kuyinto efiselekayo wamboza isembatho mncane efekethisiwe ngesandla noma noboya coat encane. Uma dress ijazi, ungakwazi bagqoke amagilavu eside. The eside emkhonweni igqoka, omfushane kufanele kube igilavu.
"Black uthayi" libhekisela izinqumo abesifazane ngaphezulu. OKUVUMELEKILE kusihlwa igqoka futhi cocktail izingubo, kodwa ngaso sonke isikhathi ngezansi ngamadolo. Ngalesi umcimbi ungase ukwazi ukukhokhela okunethezeka "nyudovoe" ingubo, umsebenzi womfekethisi ubuhlalu noma amatshe, kanye ebukekayo amabele cocktail ingubo enothuli rose umbala nge isiketi Fluffy side. OKUVUMELEKILE emuva evulekile namahlombe, ukuzikhethela ukugqoka amagilavu noboya. Ungakwazi ukukhokhela ubucwebe ezenziwe amatshe semiprecious, noma ngisho eliphezulu ubucwebe. Kodwa manje ngaphandle izicathulo ukuze isichathule ethola lutho can.
Kusihlwa cocktail izingubo (isithombe kuyoba aphansi) kungaba elikhanyayo, imibala ayegcwele, kanye nesitayela kufanele agcizelele izinzuzo zomzimba wakho. Ukuze abesifazane nge shape curvy kukhona ingubo ephelele isitayela Empire, nge waistline okusezingeni eliphezulu futhi kancane kwanda phansi isiketi. Ngakho-ke ngeke ukugxila enhle esifubeni imigqa, ukungapheleli kufihlwe okhalweni okhalweni. Uma ucabanga ukuntula kwayo amabele amancane, musa ukugqoka bustier ingubo, makube ingubo nge top evaliwe, enze ukugcizelela ngemuva evulekile noma emaqakaleni mncane.
Cocktail - umcimbi usuku oqala ngaphambi 17:00. Lena reception lulwimi loluhlelekile: yenkampani, isethulo entsha ethi embukisweni. Cocktail eqala cocktail ingubo, okuyinto obuphelele kufanele kube mfushane kuka mayelana 7 cm ngenhla kwamadolo. Decor ngesimo lace, rhinestones, sequins isibonelo, kodwa hhayi sisiningi kakhulu.
Amamodeli cocktail, kusihlwa igqoka nhlobonhlobo kodwa cocktail ukuthola ithuba ezifanele kakhulu - edume ingubo kancane black. Ukwehlukahluka kwezimangaliso izitayela ikuvumela ukuthi ukhethe dress ephelele noma luphi uhlobo sibalo. umbala Black uhlale kunenzuzo ugcizelela ukuma kanye nesitayela neckline futhi isiketi ungakwazi ukulungisa amaphutha noma ukugcizelela Imizimba ethile. Ungakhohlwa ubude izithende nenhle.
Lutho neze kuyo yonke imishado kukhona ikhodi ethile ingubo. Uma ucelwa ukuthi ingqikithi lomshado noma isitayela esithile, okufanele kusihlwa izibuko futhi cocktail izingubo izivakashi, ngokuqinisekile kumelwe banamathele. Kodwa uma imiyalelo ekhethekile mayelana nokubonakala izivakashi alikho, akusho ukuthi ungakwazi bagqoke up in ingubo ezimhlophe noma uzame isithombe somfelokazi Sicilia.
Ake uqale nge anamahlazo lokho akalungile ukuba agqoke izivakashi at the wedding, uma kungekho ikhodi ethile ingubo:
I ezimhlophe ngubo.
"Naked" ingubo inyama elinombala onjengomlilo.
Kusihlwa, cocktail izingubo kuya phansi noma amadolo sobude kuyafaneleka. Umphetho ingase iqonde noma kancane lwavutha. Umbala ingubo kufanele kuvumelane uhlobo ukubukeka kwakho, isibonelo, umuntu onezinwele abanesikhumba okhanyayo hamba coral okhanyayo noma ugodo Lilac ingubo, le Brunette - blue noma Mint. Girls abanesikhumba amnyama ungakwazi ukugqoka ingubo pink, futhi abanikazi ngezinwele ezibomvu - Emerald.
Ngo usuku obalulekile enjalo, yilezozintombi abaningi abafuni ukubukeka ngangokunokwenzeka amadala esikhundleni ukugcizelela ebusheni babo kanye freshness.
Kusihlwa sigqoka futhi cocktail izingubo Prom akufanele kube isiketi omkhulu Fluffy okungenani yisikhathi, futhi, uma kungenjalo wacabanga-ezinezihloko Prom. Futhi, ingubo akufanele futhi ube njengendoda umshado, ngaso sonke isikhathi! Kodwa ngesikhathi esifanayo akufanele kube kakhulu elula. Ukuhlobisa kanye izesekeli yokuqala ngeke iphazamise isithombe, kodwa "ukuvuthwa" inhlamba kanye ngokweqile kungcono kugwenywe.
Lilac sobuhlalo: isigaba okuyinhloko. Lilac sobuhlalo izandla siqu